Deegaano ka tirsan gobolka Mudug oo xalay ay duqaymo ka dhaceen. – The Voice of Northeastern Kenya
Deegaano ka tirsan gobolka Mudug oo xalay ay duqaymo ka dhaceen.
Star FM November 28, 2018
Wararka ka imaanaya degaanka lagu magacaabo Goodirley oo qiyaastii 10km dhanka koonfureed kaga beegan degaanka Caad ee hoos taga degmada Xarardheere ee gobolka Mudug ayaa sheegaya in Markale xalay diyaarad dagaal ay halkaasi duqeyn ka fuliyeen.
Qaar ka mid ah dadka degaanka ayaa xaqiijiyay in markale diyaarad dagaal ay dhowr Madfac ku garaaceen saldhig ay leeyihiin Ururka Al-Shabaab oo ku yaalla degaankaasi.
Sida la rumaysan yahay Waxaa duqeyntaasi ka dhashay khasaaro kala duwan walloow weli aan la xaqiijin tirada rasmiga ah ee ku waxyeelowday.
Qaar ka mid ah dadka degaankaasi ku nool ayaa warbaahinta u xaqiijiyay in duqeyntaas lala beegsaday saraakiil ka tirsan ururka Alshabaab.
Duqeynta ayaa dhacday xalay fiidkii, waxayna Mas’uuliyiinta gobolka Mudug sheegeen in goobta la duqeeyay ay maamulaan xooggaga daacad u ah Shabaab.
19,20 iyo 21 Bishaan ayay aheyd markii diyaarado dagaal ay duqeymo xooggan dhowr mar la beegsadeen isla degaanada xalay la duqeeyay, waxaana taliska Mareykanka ee ku sugan qaarada Africa uu sheegay in duqeyntaasi lagu dilay in ka badan 40 dagaallame oo AL-shabaab ka tirsan.
Bilooyinkii aan ka soo gudubnay waxaa sii kordhaayay duqeymaha diyaaradaha dagaalka ee dalka Maraykanku ay ka geysanayaan degaanada ay gacanta ku haayaan AL-Shabaab iyadoo dhawaan dowladda Federaalka Soomaaliya ay sheegtay in duqeyn lagu burburiyay Idaacad ku hadli jirtay afka shabaab sidoo kalena la dilay xubno badan oo ururkaas ka tirsan.
← DHAGEYSO:Xildhibaano dowlada eedaymo u jeediyay.
NATO backs Ukraine amid crisis with Russia →